Home Wararka Isbedelka siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo Saameynta Soomaaliya…
Isbedelka siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo Saameynta Soomaaliya…
Dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay dib u qaabayn ku samaynayso siyaasadeeda arrimaha dibadda.
Siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa isataraatajiyada ay ku hawlgalayso waxa la dejiyay sannadkii 2002, waxaanay hadda wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya sheegtay inay dib u habayn iyo qaabayn ku samaynayso qaabkii ay ku shaqaynaysay siyasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Meles Alem, ayaa wakaaladda wararka ee Itoobiya toddobaadkan u sheegay in dib u eegis lagu samaynayo jidkaas ay ku socotay siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya 16-ka sannadood, waxaanu sheegay in dib u qaabayntan siyaasadda khaarajiga Itoobiya lagu salayn doono xaaladaha caalamka ee maanta iyo xaaladda gudaha Itoobiya ee wakhtigan.
Siyaasadaas arrimaha dibadda ee Itoobiya ee la dejiyay sannadkii 2002, ayaa waxa ay ku qaabaysnayd oo ku shaqaynaysay ilaalinta ammaanka qaranka Itoobiya.
Previous article‘No love’ for Mogadishu mayor over Brexit remark
Next articleTuhunkii laga qabay xukuumadda Kheyre ee doorashada KG oo bannaanka yimid kaddib markii..
(Daawo) Wasiir Khadijo oo laga sugaayay raalli gelin ayaa eedda dusha...
Puntland oo Maxkamadeeyneeyso Odayaal iyo Siyaasiin (Ogoow sababta)